Wmv waa Miscrosoft Media Video qoreysa tayada qeexitaanka sare. Sida user Mac ah, waxaa laga yaabaa in aad dareento inta badan madax xanuun si ay ula qaab wmv qaban, oo ay ku jiraan iyaga sixiddiisa la Final Cut Pro. In kastoo Final Cut Pro yimaado qalab ku anfacaya kala duwan oo ka mid ah qaababka qabow iyo taageerada QuickTime qaab kasta oo video socon oo ay ku jiraan DV, HDV, P2 MXF (DVCProHD), XDCAM iyo 2k film qaabab, lakiin waa ay uga reebay waxa aad leedahay hadda - wmv files.
Nasiib wanaag, waxaad isticmaali kartaa wmv ah in ay Final Cut Pro Converter si loogu badalo wmv in ay Final Goo qaabab socon Pro. Just akhri maqaalka hoos ku qoran si aad u hesho wmv ugu wanaagsan ee Final Cut Pro video Converter.
Qeybta 1: Hel Best & Professional wmv in ay Final Cut Pro Converter
Qeybta 2: wmv Free in ay Final Cut Pro Converter
Qeybta 3: Online wmv in ay Final Cut Pro Converter
Professional Video Converter: Beddelaan videos in qaabab badan sida AVI, MKV, MOV, MP4, iyo in ka badan.
Presets badan: si toos ah Beddelaan videos in ay Final Cut Pro, iMovie, iPhone, iPad, ECT la presets filaayo.
Sida dhaqsaha badan Video Converter: Waxaa badasha videos xawaare Hillaaca ah, 30X xawaaraha si ka dhaqso badan dadka kale.
Best DVD gubi: Beddelaan videos in qaab kasta oo ay u DVD badan oo arrimo DVD menu oo xiiso leh.
Sida loo Converter wmv in FCP
1. Ku dar files wmv
Barnaamijkaani wuxuu bixiyaa Browser Media si aad u maamusho files warbaahinta maxalliga ah. Click , waxaa tusi doono suuqa kala browser warbaahinta .Waxaa si dhakhso ah u heshaan kartaa il videos ka dibna jiidi oo hoos u iyaga si toos ah u furmo suuqa ugu weyn barnaamijka.
Ka dib marka aad soo dhoofsadaan dhammaan faylasha wmv, waxay muujiyeen doonaa sida thumbnails. Haddii loo baahdo, aad qabsato karaa magaca faylka, awood u fur-in Cinwaan, ama iyaga ku milmaan galay file weyn.
2. Dooro qaab wax soo saarka sida aad doonayso inaad
Riix hoose qaab icon ugu waxyooda guddiga wax soo saarka. Halkan, si aad u kala duwan video iyo maqal ah qaabab dhoofin karo fiiles wmv aad. Si aad u hesho video tayada ugu wanaagsan ee Final Cut Pro, taas Video Converter Ultimate for Mac bixisaa laba doorasho filaayo: presets 1) qaybiyay u FCP. 2) codecs Native sida ProRes, Apple Dhexe codec u FCP. Si ay iyaga ugu helaan, kaliya dooro category ayeey oo uu aado ee ku aadan ikhtiyaarka.
3. Start wmv in ay diinta ka FCP ee Mac
Hadda waxaad u timid inaad tallaabo la soo dhaafay, ka furmkidoona wmv in ay diinta ka FCP ee Mac by weeraray button loogu badalo ka. Inta lagu guda jiro qaab beddelidda, kaliya waxa aad tegi karo ee asalka ah in ay is ogow waxyaalaha kale.
Ka dib markii ay ku dhameysteen wmv in la dhimo final diinta pro, waxaad si fudud u dajiyaan karaa ama ku dar videos wax soo saarka si ay Final Cut Pro. Sidaas raaxaysan sixiddiisa suuqa kala warbaahinta video la Final Cut Pro.
Qeybta 2: wmv Free in ay Final Cut Pro Converter &
# 1. Free wmv in ay Final Cut Pro Video Converter: Wondershare Video Converter Free
Waxaad isticmaali kartaa wmv oo lacag la'aan ah si ay Final Cut Pro Converter si loogu badalo videos aan watermark. Waxa ay taageertaa diinta Final Cut Pro, iMovie, Prores, iPhone, iPad, telefoonada Android, iwm la presets filaayo. Sidoo kale waxaad sameyn kartaa qaabab wax soo saarka sida AVI, MKV, MP4, MOV, iyo in ka badan.
Qasaarooyinka: tayada video saarka ma u fiican yahay sida Video Converter Ultimate. Oo weliba waxaa ka maqan qaar ka mid ah shaqada Video Converter Ultimates ee, sida video gubanaya si DVD.
> Resource > FCP > Import wmv in ay Final Cut Pro leh tayo wanaagsan